कोरियामा भिषा सकिन लागेका विदेशी नागरिकको भिषा ३ महिना स्वत थपिने ! – Korea Pati
April 9, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on कोरियामा भिषा सकिन लागेका विदेशी नागरिकको भिषा ३ महिना स्वत थपिने !
किशन गौतम /दक्षिण कोरियाले यहाँ रहेका बिदेशीक नागरिको भिसा पुनः तीन महिना थप गर्ने भएको छ । कोभिड-१९ का कारण स्वदेश फर्किन असम्भब भएका बिदेशी नागरिकको हकमा लागु हुने गरि सो नियम ल्याएको न्याय मन्त्रालयले बिहिबार बताएको छ ।आगामी मे ३१ सम्म कोरियामा कार्यरत ६० हजार बिदेशी नागरिकको भिसा सकिदै छ ।
असहज परिश्थिति लाइ मध्येनजर गर्दै दोस्रो पटक भिसा थपको कार्ययोजना ल्याएको बताइएको छ ।यसभन्दा पहिला गत फेब्रुरीमा ५० दीन सम्मको भिसा थप गर्ने नियम ल्याएको थियो । हालको नियमानुसार फेब्रुरीमा ५० दीन भिसा थप गर्नेहरुले पनि पुनः ३ महिनाको भिसा थप्न पाउनेछन ।
यधपी इ -९ र इ १० को हकमा भने आफ्नो देशको अबस्था बुझाएर मात्र केहि समयको लागी भिसा थप हुनेछ ।“हामीलाइ भिसा थप गरिदिन दैनिक २५ सय अनुरोध आउने गरेका छन् ” मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।कोरियाले हाल विदेश बाट आउने सबै किसिमका भिसाहरु रद्व गरेको छ । उक्त अबधिमा कोरियामा हुने कामदारको अभावलाई भिसा अबधि थपको नीतिले पूर्ति गर्ने देखिन्छ ।
भिसा थप थप गर्न चाहने विदेशीले अध्यागमनको वेबसाइट (www.hikorea.go.kr) वा फोन नम्बर 1345 मा सम्पर्क गरि थप जानकारी लिन सक्ने बताइएको छ । यो पटक पनि भिसा थप अनलाइन बाटै हुनेछ ।५० दिने भिसा थप नीति अन्तर्गत गत फेब्रुरीको अन्त्य सम्म १ लाख ३० हजार बिदेशी नागरिकले आफ्नो भिसा अबधि बढाएका थिए । hellonepalkorea.com
September 25, 2020 September 25, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
January 29, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने